Laptobyada ugu jaban ee ugu fiican - Waxaan kaa caawineynaa inaad wax badbaadiso
In ka yar € 500
In ka yar € 1000
Ku ciyaarista wax ka yar €1000
Qiimaha ugu fiican ee lacagta
Waa maxay laptop aad iibsanayso?
Daabacaad Video ah
In la jadwaleeyo
Si aad u shaqayso
2-in-1 la bedeli karo
No nidaamka hawlgalka
Laptop Chinese ah
Buug-yar oo khafiif ah
Laptobyada ugu jaban ee ugu fiican
Waxaan is barbar dhigeynaa oo u falanqeyneynaa laptops raqiis ah iyadoo loo eegayo sifooyin gaar ah si aad u hesho tayada iyo qiimaha ugu fiican.
Heshiisyada Maanta ee Laabtoobyada jaban
Iibsashada mid ka mid ah laptop-yada jaban waxay la mid tahay iibsashada baabuur. Waa in aad cilmi baadhis ku samaysaa tobankiiba sagaal jeer waxa aad u baahantahay in aad "dhiibto" ka hor inta aanad go'aansan in aad guriga u kaxayso ,maxaa yeelay waxa laga yaabaa in waxa deriskaaga ku haboon aanay kugu haboonayn. Kahor intaadan xitaa ka fikirin nooca aad jeclaan lahayd, waa inaad tixgelisaa qiimaheeda iyo miisaaniyada aad haysato..
Si aad u nafiso, waxaanu samaynay qaybtii ugu adkeyd ee shaqada, anagoo ku ururinayna maqaalkan laptops ugu jaban. Waxaan ku darnay nooc baahi kasta leh, si kasta oo aad u isticmaali doonto, hubaal waxaad heli doontaa mid kugu habboon.
Haddii aadan weli garanayn laptop-ka raqiis ah ee aad rabto, hoos waxa aad haysataa hagayaal taxane ah oo wax iibsiga kuwaas oo kaa caawin doona in aad doorato iyadoo lagu salaynayo sifooyinka aad raadinayso:
Laabtoobyada marka loo eego qiimaha
Qiimaha tayada laptop-ka ugu fiican
Laptop-ka ciyaarta wax ka yar 1000 yuuro
Laabtoobyada wax ka yar 1000 euro
Laabtoobyada wax ka yar 500 euro
Laabtoobyada nooc ahaan
Buug xusuus qor raqiis ah
Laptop Linux ah. Midkee la iibsanayaa?
Laptops oo leh SSD
2-in-1 laptops la bedeli karo
Laptops aan lahayn nidaamka hawlgalka
Magacyada laptop-yada ugu fiican
Laptops sida ku cad shaashadda
Laptop 13 inch ah
Laptop 14 inch ah
Laptop 15 inch ah
Laptop 17 inch ah
Laptops sida waafaqsan isticmaalka aad rabto in aad siiso
Laptop loogu talagalay naqshadeynta garaafka
La qaadi karo si loogu tafatiro fiidyaha
La qaadi karo carruurta
La qaadi karo oo loogu talagalay barnaamijyada
La qaadan karo si loo shaqeeyo
Iyada oo miisaaniyad ah € 500 iyo € 1.000, isbarbardhiggani wuxuu kaa caawin doonaa inaad doorato baahidaada.
Haddii aadan haysan fasal aad iibsanayso, waxaanu kaa dhignay mid hage dhameystiran si aad u dooran karto maxaa laptop ah si aad u iibsato adigoo gujinaya linkiga.
Laptops-yada ugu jaban ee ugu fiican 2021
Hagaag, annagoon xiiso dheeraad ah lahayn, aan ku bilowno laptops-yada ugu jaban ee ugu fiican 2021. Si aad u sameyso liiska, kaliya ma tixgelineyno qiimaha, laakiin sidoo kale naqshadeynta, farsamooyinka farsamada iyo dhinacyo kale oo badan.
Fiiri dalabka weyn ee aan helnay wax yar ka hooseeya sababtoo ah qaabkani waa hubaal in la tixgeliyo, sababtan awgeed waxaan u dhignay marka hore. Waa buug dhuuban oo aamusan. Waxay u badan tahay inay sida ugu fiican u isticmaali karto sidii laptop labaad ama laptop ahaan shaqo ahaan ardayda iyo xirfadlayaasha. Waxaad helaysaa waxa aad bixiso, si aad u fiican inaadan filaynin xawaaraha ama isticmaalka. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo uu yahay laptop-ka ugu jaban ee liiskan ku jira, waxa uu ka kooban yahay astaamo aad u qurux badan.
Midka ugu caansan waa 64 GBTani waa sifada weyn oo inta badan laptop-yada aan ku darnay liiskan ay ka maqan yihiin. Waa inaad ka fikirtaa Buugga Herobook ee CHUWI sida jawaabta Microsoft ee buugga Chromebook. Haddii aadan la socon nidaamka hawlgalka Chrome oo aad caadaysatay inaad isticmaasho Windows 10, markaa tani waa mid ka mid ah laptop-yada ugu jaban ee Microsoft.
Kumbuyuutarkan waxay noqon doontaa mid aad ugu habboon isticmaalka maalin kasta oo fududIsticmaal internetka, isticmaal Microsoft Office (sida Word iyo Excel), koontarool oo cusboonaysii shabakadaha bulshada, adeegso adeegyada fiidyaha ee qulqulka ...)
Waa mid ka mid ah laptops-yada ugu jaban ee liiskan ku jira, laakiin taasi macnaheedu maaha inaysan awood lahayn. Isticmaalka maalinlaha ah waxay ku siin doontaa a nolosha batteriga si cadaalad ah u dheer, si degdeg ah u habaysan Waxaad xitaa ciyaari kartaa ciyaaraha fudud ee fiidiyaha ah (marka aad u adag tahay way gaaban tahay laakiin haddii aad u raadinayso laptop ilmo, tani waa ikhtiyaar weyn, i aamin).
Waayo-aragnimadeena, Ciladda ugu weyn ee laptop-kan ayaa ah inuusan lahayn DVD-ga. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay noqonaysaa wax caadi ah oo loogu talagalay laptops-yada qiimahan kala duwan, markaa ha u ogolaan inay tani kaa saarto, maadaama inta badan software aad u baahan tahay, sida Microsoft Office, waxaa loo iibsan karaa soodejin ahaan. In kasta oo, haddii ay tani runtii dhib kugu tahay, waxaad dooran kartaa inaad ku iibsato darawal DVD dibadeed wax ka yar 30 euro.
Wixii intaas ka baxsan, iyada oo ay ugu wacan tahay cabbirka weyn ee muraayaddeeda, tayadeeda iyo sifooyinka aan soo sheegnay, kani waa laptop aad u fiican oo loogu talagalay miisaaniyadaha adag.
ASUS Vivobook 15,6 inji HD
Asus VivoBook waa suurtogal mid ka mid ah laptop-yada ugu jaban ee isticmaalka maalinlaha ah ee liiskan ku jira. Waxay noqotay iibka sare ee Amazon, iyo marka la barbar dhigo laptops kale ee qiimaha kala duwan, waxaan si fudud u arki karnaa sababta.
Tilmaamaha aan ku soo koobnay liiskii hore waa wax iska caadi ah laptop-ka dhulka oo dhan, haddaba maxaa ka dhigaya mid gaar ah? Hagaag, Asus wuxuu doortay inuu bixiyo qiimo aan la jabin karin oo lacag ah iyo bandhig HD leh Kaarka garaafyada isku dhafan ee Intel HD Graphics 620 iyo v2 Dolby Advanced Audio si aad u daawato TV ama filim leh dhammaan tayada aad filaysay.
Tani waa nooca laptop-ka kaas waxaad u isticmaali kartaa labadaba shaqada iyo multimedia. In kasta oo aanay ahayn kan ugu yar ama kan ugu badan ee la qaadi karo, haddana way fududahay in guri loo qaado bannaanka iyo dibadda iyo guriga, lagala shaqeeyo Windows 10, daawato filimada iyo telefishanka ama xataa la ciyaaro ciyaaraha fiidyaha ee fudud. Wixii ay ku kacayso, waxaan cadeynayaa inay tahay mid ka mid ah laptops-yada ugu fiican ee kala duwan qiimahan suuqa.
Laptop-kani xoogaa wuu ka jaban yahay kuwa kale ee lagu taliyay, laakiin waxaan go'aansanay inaan ku darno si kastaba sababtoo ah hagayaasha laptop-yada miisaaniyada waxay ka dhigeen kaalimaha ugu sarreeya, xitaa kaalinta koowaad ee liiska Lataliyaha PC ee ugu wanaagsan ee la awoodi karo ee 2021. Marka, miyay mudan tahay in la bixiyo lacagtaas dheeraadka ah mise way u qalantaa qaabkan?
Waxaan ku darnay HP 14 liiskayaga laptops-ka miisaaniyada ugu fiican ee 2021 sababtoo ah waxay qaadan kartaa wax kasta oo aad ku tuurto (marka laga reebo lebenka) iyo in yar oo dheeraad ah.
Waxay si dhakhso ah u duuleysaa dhammaan codsiyada shaqada aasaasiga ah sida Microsoft Office, browsing web guud ahaan, baahinta adeegyada fiidiyowga iyo xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad ciyaarto ciyaaraha fiidiyowga (in kasta oo ay tahay inaanan iloobin in aan loogu talagelin taas, waa xoogaa gaabis ah iyo garaafyada ayaa ah kuwa dhexdhexaad ah oo tayo hooseeya).
Waxaas oo dhan, waxaan u tixgelineynaa mid ka mid ah laptop-yada ugu fiican ee kala duwanaanshaha qiimaha, maadaama aad ku heli karto wax ka yar 300 euro.
Joogitaanka Lenovo Ideapad ee liiskan waa wax la yaab leh. Buug-yarahan wuxuu leeyahay a Shaashada taabashada LED rotary, Full HD (1920 x 1080). Tani waxay ka dhigan tahay inaad ku dhejin karto qaabka daawashada haddii aad rabto inaad si raaxo leh u daawato fiidiyowyada YouTube ama filim kasta.
Waa kan wuxuu leeyahay processor-ka ugu fiican liiska, markaa hubaal waa ikhtiyaar weyn haddii aad raadinayso waxqabad wanaagsan oo aad ku raaxaysato 2-in-1 laptop la bedeli karo.
Lenovo Yoga wuu ka yara fudud yahay laptop-yada kale, laakiin wali lama mid noqon karo buugaagta Chromebook-ka ee aan hoos ku eegayno arrintaas. Waxa uu ka awood badan yahay Laptop-yada aan tuducyadii hore ku soo xusnay, inkasta oo muraayadda isku laabma ay u ekaan karto mid macmal ah, haddana waxa la sheegay in uu si fiican u shaqeeyo, taas oo ay ugu wacan tahay. la taabto. Asal ahaan qaabkan Waxay leedahay la isticmaali karo tan Packard Bell EasyNote, laakiin leh astaamo sare.
Laptops-yada ugu jaban ee ugu fiican sida ay u isticmaalaan
Hawlaha aasaasiga ah:
AMD A6-9225 Processor, DualCore 2.6GHz ilaa 3GHz, 1MB
Si aad u shaqeyso:
Jiilka toddobaad ee Intel CORE.I5 DUAL-CORE Processor
SHAASHKA XANUUNKA IFTIINKA AH
GARABKA INTEREL IRIS PLUS 640
LG garaam 17Z990-V -...
Ultralight, oo miisaankeedu yahay 1340 g oo keliya iyo cimrigiisa batari ilaa 19.5 saacadood, LG gram waa kan ugu caansan 17 "laptop ...
Windows 10 Daabacaadda Guriga (64bit RS3) si aad u hesho hawl qabad fudud
Xusuusta la fidin karo, 512 GB SSD sida caadiga ah oo leh boos dheeri ah si loo ballaariyo ilaa 2 TB; 8 GB oo RAM ah oo leh xusuusta ...
Si aad u safarto:
Microsoft oogada Pro 7 -...
12.3-inji taabasho taabasho ah (2736x1824 pixels)
2 ee 1:
14 "shaashad, FullHD 1920x1080 pixels IPS
AMD Ryzen 5 2500U Processor, Quadcore 2.5GHz illaa 3.4GHz
Talooyin ka hor iibsashada
Ka dib tilmaan guud oo ku saabsan laptops qiimaha ugu fiican, waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso wax gaar ah. Xaaladdan oo kale uma baahnid inaad ka walwasho, waxaan haynaa dhowr isbarbardhig kuwaas oo sidoo kale xiiso kuu yeelan doona.
Qiimaha tayada laptop-ka ugu fiican. Isbarbardhig xoogaa ka badan oo dhammaystiran marka la barbardhigo tayada iyo qiimaha moodooyinka qaarkood. Si aad u tixgeliso haddii aad rabto inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato lacagtaada.
Laptops-ka ciyaaraha. Isticmaalayaasha raba inay iibsadaan laptop si ay u ciyaaraan ciyaaraha. Waxaanu ku qiimaynay hawl-wadeenada ugu sareeya sifooyin iyo qiimaba si aad uga faa'iidaysato garaafyada iyo waxqabadka.
Magacyada laptop-yada ugu fiican. Waxaad arki doontaa in dhammaan noocyada halkan ku jira la yaqaan oo sidaas darteed Shiine ma aha. Waxaad arki kartaa isbarbardhigga dhammaystiran haddii aad rabto macluumaad ka wanaagsan arrintan. Waxaan bixinaa aragti dhamaystiran kuwaas oo ah noocyada aad ku kalsoon tahay. Waxay la mid yihiin kuwa aan ku barbar dhigno boggayaga laptops raqiis ah.
Imaatinka weyn ee Windows 10, Laptop-yada ayaa mar kale kor u kacaya. Laakiin tani maaha sababta kaliya ee guushan, waxay sidoo kale saameyn ku yeesheen caannimada Ultrabooks iyo kordhinta isku-dhafka laba-in-hal ee u adeega sida laptop-ka iyo sida kiniiniga. Laptop-yada jaban ayaa ka sii xoogeysanaya buugaagta Chromebooks iyadoo ay ugu wacan tahay moodooyinka sida HP Pavilion x2. Dhanka kale, Laptop-yada leh awood ku filan oo ay ku ciyaaraan ciyaaraha waxay sidoo kale arkayaan saameyntooda oo sii kordheysa waxayna u muuqataa inay si fudud u noqon doonaan beddelka wanaagsan ee kombuyuutarradayada miiska.
Iyada oo ay jiraan doorashooyin badan, doorashada laptop-ka ugu fiican ee baahiyahaaga ayaa noqonaysa mid aad u adagTaasi waa sababta ay muhiim u tahay, marka ugu horeysa, inaad go'aansato waxaad ku samayn doonto.
Haddii aad rabto in aad si degdeg ah oo fudud u doorato laptop-ka ku habboon baahiyahaaga, waxaanu kugula talinaynaa taas eeg boggan.
Isticmaalayaasha kuwaas oo raacaya wakhtiga bootinta degdega ah iyo kombuyuutarka miisaanka fudud sababtoo ah waxay rabaan inay la socdaan waa hubaal inay ku faraxsan yihiin Ultrabook.. Ciyaartoyda, dhanka kale, waxay dooran doonaan laptops ku habboon garaafyada baahida iyo habaynta baahiyaha, iyo kuwa u baahan aalad bixisa dabacsanaan, waxay dooran doonaan isku-dhafan laba-in-hal ah.
Marka hore, waxay u ekaan kartaa mid aad u adag - oo leh dhammaan xulashooyinkaas - laakiin Hadafkayagu waa inaan kaa caawino inaad hesho laptop-ka ugu fiican wax kasta oo aad u baahan tahay. Na rumayso markaan kuu sheegno inuu jiro laptop kugu habboon. Tilmaamahan, kaliya ma heli doontid, laakiin waxaad 100% hubin doontaa iibsashadaada.
Isbarbardhigga Laptops: Natiijada kama dambaysta ah
Qiimaynta aanu samaynay ayaa noo horseeday inaanu doorano saddex guuleyste oo ka mid ah 10-ka laptop ee la falanqeeyayKuwani waa saddexda nooc ee aan ku darno isbarbardhigga laptop-kan.
El marka hore la kala saaro, ku guulaysta Abaalmarinta Dahabka, waa HP Envy x360 de 13,3 inches. Laptop-kani waxa uu leeyahay processor-ka Intel Core i7 oo awood badan iyo 256GB oo SSD ah – oo la fidin karo 512 GB. Intaa waxaa dheer, wuxuu ku shaqeeyaa Windows 10, wuxuu leeyahay madax-bannaani ilaa 9 saacadood iyo 28 daqiiqo, culeyskiisuna waa 1,3 kg kaliya, Shaashaddeedu waa mid aad u fiican, oo xallinta 1920 x 1080 pixels iyo ilaa 2560 x 1440 dhaqdhaqaaqa.
Waa run in cabbirka 13,3-inji aanu lahayn shaashadda ugu weyn ee suuqa, laakiin waxay ka dhigaysaa iyada oo la qaadi karo. HP Specter x360 wuxuu leeyahay saddex dekedood oo USB 3.0 ah oo ku siinaya marin deg deg ah dhammaan aaladaha USB-ga. Laptop-kani waxa uu ku haboon yahay kaadhadhka SD iyo HDMI. Soo saaraha ayaa bixiya taleefoon online ah, wada sheekeysi iyo adeeg farsamo, iyo sidoo kale warbaahinta bulshada.
El Qaybta labaad iyo ku guulaysta Abaalmarinta Silver waa taxanaha Dell Inspiron 5570 de 15 inches. Xawaaraha processor-ka buug-yarahan waa 3,1Ghz, sida processor-kiisa aasaasiga ah, Intel Core i3, wuxuu ku siinayaa jawaab degdeg ah. Waxa aad u soo jiidasho leh oo ku saabsan laptop-kan ayaa ah in aad u cusboonaysiin karto kaarka garaafyada ilaa kaarka fiidiyowga AMD haddii aad u baahan tahay inaad ku shaqeyso garaafyo qeexid sare leh. Awoodeeda kaydinta 1.000 GB ee dariiqa adag ayaa ku filan waxayna ku siinaysaa boos badan oo faylashaada badan.
Nidaamka hawlgalka, Windows 10, ayaa si fiican u shaqeeya. Waxay leedahay baytari raagaya 5 saacadood iyo 45 daqiiqo, runtu waxay tahay in dhinacan la wanaajin karo. Inspiron 5570 wax yar ayuu ka culus yahay guushayada, 2.2 kg, tani, qayb ahaan, waxaa sabab u ah shaashadeeda 15-inch. Sida HP Envy X360, markii aan ku samaynay Inspiron si loo tijaabiyo kulaylka, gunteedu waxay gaadhay 37.7 digrii taas oo, sidaan horayba uga hadalnay, raaxo ma leh haddii aad ku qabato dhabtaada. Xallinta shaashadda aasaasiga ah waa 1920 x 1080 pixels, laakiin waxaad u cusboonaysiin kartaa xal aad u sarreeya, 3840 x 2160 - ama waxa la mid ah, a Muujinta 4K. Waxay leedahay laba dekedood oo USB 3.0 ah iyo hal USB 2.0 deked ah.
Ugu dambeyntii, kaalinta saddexaad iyo ku guuleystaha Abaalmarinta Bronze waa Acer Swift 5 de 14 inches. Habkani waxa uu leeyahay xawaarihiisa processor-ka 3,4GHz, oo aad ugu weyn laptop-ka qaybtan. Qiimaynta guud ee A-, xogta waxqabadkayadu waxay muujinaysaa in processor-ku aanu ahayn waxa PC-ga ku haya booska saddexaad. Qaabka aasaasiga ah wuxuu leeyahay 256GB SSD nidaamkiisuna waa Windows 10.
Celceliska cimrigiisu waa 7 saacadood iyo 36 daqiiqo, taas oo ka hoosaysa celceliska laptop-yada aanu dib u eegnay. Xallinta shaashadda aasaasiga ah waa 1920 x 1080 pixels, laakiin waxaa loo cusboonaysiin karaa 2560 x 1440. Intaa waxaa dheer, Acer Aspire Swift wuxuu leeyahay laba dekedood oo USB 3.0 ah iyo hal deked USB 2.0 ah.
Isbarbardhigga waa moodooyinka ugu caansan, sidaas darteed moodooyinka ku dhawaad ​​€1.000. Haddii aad leedahay miisaaniyad adag, eeg isbarbardhiggayaga Laptop-yada qiimaha tayada leh ama kuweena dib u eegista laptop jaban si loo helo kan ugu jaban.
Si loo dhammeeyo isbarbardhigga laptop-kayaga, waxaan ku qeexi doonaa waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee laptops-yada haddii aad rabto inaad wax yar ka sii kordhiso qayb kasta maadaama aan hayno maqaallo la xiriira.
Sida iibsashada kale ee weyn, Markaad ka fekereyso inaad iibsato laptop, euro kasta oo u dambeeya waa la xisaabiyaa. Waa aalad socon doonta dhowr sano, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso hagahayada laptop-yada ugu fiican ka hor intaadan wax go'aan ah gaarin.
Dhawr sano ka hor waxa jiray oo kaliya Laptop-yo la isku xidhi karo iyo Laptop-yo ay shaqaynayeen. Maanta, beddelkeeda, dhawr doorasho ee qayb kasta. Aan ku bilowno aasaaska:
Laptop-yadani asal ahaan aaladaha ay tahay in ay buuxiyaan sifooyin gaar ah oo ah caato, iftiin, xoog iyo cabbir Waxaa dejiyay processor-ka Intel, si uu u caawiyo kuwa sameeya laptop-yada Windows ee daacadda ah ee kula tartamaya Apple 13-inch MacBook Air.
Si kombuyuutar Ultrabook loo suuq galiyo sidaan oo kale, waa inuu buuxiyaa qeexitaannada adag ee ay dejisay Intel. Waa inuu ahaado mid khafiif ah, ma noqon karo dhumuc weyn (marka la xiro) in ka badan 20 mm shashadaha 13.3-inch ama 23 mm ee 14-inch ama ka weyn. Intaa waxaa dheer, waa inay lahaataa nolosha batari lix saacadood ah haddii aad ciyaareyso muuqaal qeexid sare ah ama sagaal haddii uu yahay mid aan shaqayn.
Fiiri ah barbardhiga ultrabooks raqiis ah waxa aan hayno.
Ma qaadan karto wax ka badan saddex ilbiriqsi in Ultrabook uu ka soo baxo hibernation. Laptobyadani guud ahaan waxay leeyihiin qalab adag oo adag iyo astaamo ay ka mid yihiin amarrada codka iyo shaashadaha taabashada. Ultrabooks waxaa loo nashqadeeyay iyadoo maskaxda lagu hayo qaadis iyo wax qabad, laakiin waa la qiimeeyaa mid ka sarreeya, caadi ahaan wuxuu ka bilaabmaa $ 900.
Natiijadu waxay noqotay qaar Laptops tayo sare leh oo aan lahayn wax ka hinaaso laptopsyada Apple ugu fiican. Ultrabooks waa laptops ku dhawaad ​​​​2 sentimitir qaro weyn, leh nolol batari dheer iyo muuqaal fiiqan, sida Dell XPS 13 ama Asus Zenbook.
Lenovo Yoga (2021) maaha oo kaliya laptop la yaab leh oo khafiif ah, waase gabi ahaanba waa kacaan heerka naqshadeynta. Ku dhejinta shaashad 13,9-inji ah oo ku jirta qaab 11-inji ah maahan wax yar, laakiin Lenovo waxay sidoo kale samaysay mucjiso abuurista kormeere iyada oo aan lahayn cidhif aan dhammaad lahayn. Yoga 910 sidoo kale waa laptop aad u xoog badan, qalafsan oo leh qiimo aad u jaban oo lagu taliyay. Waxaas oo dhan waxaan u aragnaa inay tahay Ultrabook-ga ugu fiican.
Laptop-ka ciyaaraha waa sidaad u malaynayso - PC loogu talagalay taageerayaasha ciyaarta fiidyaha ee runta ah. Marka la soo koobo, looma isticmaalin inay ku ciyaaraan Candy Crush ama Angry Birds, laakiin waxay ku ciyaaraan ciyaaraha PC-ga culus ee u baahan processor-ka sare, 8GB ilaa 16GB ee RAM, ugu yaraan 1 TB oo kayd ah iyo kaadhka sawirada. taasoo ah sifada ugu muhiimsan. Laabtoobyada ciyaaraha guud ahaan waa laba jibaaran yihiin dhismahooduna wuu ka adag yahay laptop-yada kale, shaashaddooduna inta badan waa xallin sare.
Waad arki kartaa our falanqaynta ee laptops ciyaaraha ugu fiican.
Laabtoobyada ciyaaraha maaha inay noqdaan kuwo khafiif ah ama khafiif ah, maadaama sida caadiga ah ciyaartoydu ay isticmaalaan halkii ay ka isticmaali lahaayeen kumbuyuutarka desktop-ka. Laptop-ka ciyaaraha wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ciyaarto isla ciyaaraha kombayutarka desktop-ka, laakiin faa'iidada ay leedahay waa la qaadi karo oo ku filan inaad qol ka guurto oo aad qol kale ku ciyaarto ama aad ku ciyaarto guriga saaxiibkiis.
Waqtiyadii dhawaa, laptops-yada ciyaaraha waxay sameeyeen horumar cajiib ah oo ay isku dayayeen inay la qabsadaan dhiggooda desktop. Dareenkan, waxay u muuqataa in gabagabada ugu macquulsan ee horumarkan uu yahay in la bilaabo in lagu daro qaybo ka mid ah miisaska kumbuyuutarrada ciyaaraha. Habkani waa a Laptop 15,6-inji ah oo aad u awood badan, oo leh processor-ka desktop cabbirkiisu dhan yahay iyo GPU-ga moobilka ugu sarreeya la heli karo. Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso in isku-dhafkan uu samayn doono laptop weyn, laakiin kani wuxuu maareeyaa inuu ku xidho dhammaan jidh yar oo caddaalad ah.
Laabtoobyada Ardayda iyo Shaqada
Laptop-yada ganacsigu waxay la mid yihiin kuwa caadiga ah ee laptops-yada looga hadlay maqaallada kale, laakiin waa loo dhisay si tayo sare leh, qaybahooda ayaa aad u waara oo guud ahaan waxaa lagu iibiyaa dammaanad dheer oo dhamaystiran. Waa inaadan u baahnayn inaad beddesho laptop-kaaga ganacsi labadii sanaba mar sababtoo ah wakhtigu wuu dhacay.
Munaasabadan waxaan ku talinaynaa hagaha buug-yaraha ardayga.
Noocyada noocaan ah ee Laptop-yada waxaa loo qaabeeyey iyadoo maskaxda lagu hayo wax qabadkooda, iyadoo ay wataan Processor-rada Quad-core oo si fudud u qabsan kara dhowr hawlood oo adag isku mar mar haddii ay tahay inaad awood u yeelatid inaad socodsiiso dhammaan software-yada lagama maarmaanka u ah si aad hawshaada u gudato, iyadoo uusan kombuyuutarku hoos u dhicin. Laptobyadani guud ahaan ma haystaan ​​kaarar garaafyo waaweyn, laakiin waa lagu dari karaa haddii shaqadaadu ay ku jirto sawir-gacmeed ama muuqaal tafatir ah.
HP Pavilion 14-ce2014ns waxaa laga yaabaa in siyaabo badan ay u la mid noqdaan MacBookga, laakiin waa mashiinka siyaabo badan uga fiican. Way ka khafiifsan tahay, fudayd, iyo si ka soo jiidasho badan iyada oo ay ugu mahad naqayso jidhkeeda aluminium. Intaa waxaa dheer, Laptop-kani wuxuu kaloo leeyahay a Xallin sare oo HD ah oo buuxa, Intel Core i7 CPU iyo 1TB ee kaydinta HDD ahaan ikhtiyaari. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu yaabka badan ayaa ah inaad waxaas oo dhan ku heli karto ku dhawaad ​​​​800 euro, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah laptops-yada ugu fiican haddii aad leedahay miisaaniyad arday.
Waxaa loogu talagalay in si gaar ah loogu shaqeeyo, sidaas darteed magacooda, buug-yarahan guud ahaan dhumucdiisuna waxay maskaxda ku hayaan hal shay: wax soo saarka. Iibiyeyaashu guud ahaan waxay ku qalabeeyaan cutubyadan GPU-yada xirfadleyda ah, sida taxanaha Nvidia Quadro ama khadka AMD FirePro.
Sifooyinkiisa kale waxaa ka mid ah a kala duwanaansho ballaaran oo dekedo ah iyo galaangal sahlan oo gudaha ah marka loo eego laptopsyada kale ee madadaalada. In aan la xusin waxyaabo badan oo dhaxalgal ah, sida TrackPoint cursors, iyo fursadaha amniga heerka hardware, sida sawir-qaadayaasha faraha. Tusaale ahaan waxaan xusi karnaa kaarboonka Lenovo ThinkPad X1 iyo HP ZBook 14.
Lenovo Ideapad 330, oo ay ugu wacan tahay bilicdeeda aan la sheegin iyo naqshadeeda joogtada ah, waa wax walba oo aad ka rabto goobta shaqada ee moobaylka. Waxaa dheer, waxay siisaa xirfadlayaasha xallinta shaashadda weyn, nolosha batteriga dheer, iyo waxqabadka adag, la isku halayn karo.
Iyadoo la tixgelinayo in ay ku kacayso 900 euro, waxaa habboon in la bixiyo dheeraadka ah wax kasta oo ay siiso xirfadlayaasha ka shaqeeya bannaanka xafiiska.
Laptops-laba-hal ah (isku-dhafan)
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa isku dara isticmaalka laptop-ka iyo kan tablet-ka, waxay u badan tahay in qalabka isku-dhafka ah uu adiga kugu habboon yahay. Ku shaqeeya nidaamka qalliinka ee laba-isticmaalka ah, Microsoft's Windows 8Qalabkani waxa uu u samaysan karaa qaab tablets ah oo qalabyada lagu xidhi karo si ay u shaqeeyaan sidii Laptop-yada, ama waxa ay ahaan karaan qaab Laptop ah oo qaab tablet ah marka laga go'o keyboard-ka. Waad arki kartaa halkan isbarbardhiggayaga 2-in-1 buug-yaraha la bedeli karo haddii aad xiisaynayso moodooyinkan.
Dabcan, Fikradda ayaa ah in la bixiyo qalab si guul leh ugu adeegi kara kumbuyuutar ahaan iyo laptop ahaan labadaba, si aysan u haysan qalab badan oo guriga ku wareegsan. Soo bandhigida aaladahan suuqa ma fududayn, laakiin tusaalaha ugu fiican ee awooddooda waa Microsoft's Surface Pro 3.
HP Specter x360 13 kaliya maahan aaladda ugu layaabka badan uguna badan ee laga helo summada HP ilaa hadda, waa Laptop-ka isku-dhafka ah ee ugu xiisaha badan suuqa. Ka dib sannado badan oo dib-u-habayn ah, kaniinigan cusub ee isku-dhafka ah ee HP waxa uu soo maray horumaro la taaban karo, sida shaashad weyn ama xallin sare. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah walxaha yar yar ayaa dib loo habeeyay, sida hinge-ga ama nooca daboolka, si HP Specter looga dhigo mid aad u deggan oo sahlan in la isticmaalo.
Waxaad garan doontaa laptop-ka ciyaaraha isla markaad aragto: cabbirka weyn, nalalka biligleynaya, rinjiyeynta gashashka, iyo taageerayaasha qeylada leh. Inkastoo Waad ku mahadsan tahay muuqaalka moodooyinka khafiifka ah, khafiifka ah iyo kuwa quruxda badan, sida Razer Blade ama MSI GS60 Ghost Pro, jaantuskan ayaa bilaabay inuu isbeddelo..
Cadaadis link this Waxaad haysataa isbarbardhig dhamaystiran oo ku saabsan laptops si aad u ciyaarto (ciyaaraha).
Guud ahaan, laptops-yada ciyaaraha waa ku qalabaysan GPU-yadii ugu dambeeyay ee mobilada ee Nvidia iyo AMD si aad u ciyaarto ciyaarihii ugu dambeeyay iyo sidoo kale hadii aad ku ciyaarto kombayutarka miiska (waxaa jira noocyo qaar oo si toos ah u bedeli kara kombayutarka miiska).
Laabtoobyada Ujeedada Guud
Noocan ugu dambeeya ee laptop-ka waa ay adag tahay in la kala saaro. Waa mashiino weli raacaya heerarkii la dejiyay tobannaan sano ka hor ee waxa loo malaynayo inuu yahay laptop, inkasta oo la safeeyey. Iyadoo la tixgelinayo dhammaan wixii suuqa Laptop-ka uu isagu bixiyay. sida caadiga ah kuwa qaybtan waxaa loo arkaa kombiyuutarada raqiis ah ama kuwa dhexe.
Laptopsyadani waxay ku kala duwan yihiin cabbirada shaashadda min 11 ilaa 17 inch oo guud ahaan ma laha astaamo aad u badan oo ku hoos dheggan caagaggooda caadiga ah. Waa kombiyuutaro awood u leh inuu qabto hawl maalmeedka laakiin way gaabiyaan markaad haysato baahiyo badan oo baahan. waan rumeysanahay sawirkan Waxay kaa caawin doontaa in yar si aad wax walba u aragto garaaf ahaan.
Sannadkii 2014-kii 13-inch MacBook Pro waxa la odhan karaa waxa uu ahaa laptop-kii ugu wacnaa ee ay Apple soo saarto. Qaabka 2021 si uun wuu ka dheereeyaa wuxuuna bixiyaa nolol batari dheer. Marka laga reebo cusboonaysiinta gudaha, 2021 13-inch MacBook Pro waxa uu dhaxlay qalabka cusub ee Force Touch trackpad. Waxaa laga yaabaa in Apple aysan u muuqan codsigeeda ganacsi, laakiin helitaanka Mac aad ayey u soo jiidataa haddii aad ku xisaabtanto software-ka ay bixiso iyo cusbooneysiintiisa.
Buugaagta Chromebooks waa mid ka mid ah laptop-yada ugu yar uguna fudud suuqaLaakiin waxa ka maqan awoodda iyo kaydinta buugaagta xusuus-qorka ee dhaqanka ah. Halkii laga isticmaali lahaa nidaamka Windows ama Macintosh, Chromebooks waxay ku shaqeeyaan Google Chrome OS, oo si gaar ah loogu talagalay daalacashada internetka iyo wax yar oo kale. Caadi ahaan darawalkoodu aad ayuu u yar yahay - qiyaastii 16GB - shaashadu caadi ahaan waa 11 inch, waxayna badanaa leeyihiin hal deked USB ah.
Waxaan haynaa falanqayn dhamaystiran oo isbarbardhigga ah Chromebooks sida laptopsyada yaryar ee ugu fiican.
Si kastaba ha ahaatee, waxay kuu oggolaanayaan inaad ku kaydiso sawirada, fiidiyowyada iyo dukumentiyada kale Google Drive halkii aad ku kaydin lahayd darawalkaaga adag.. Xallinta shaashadeedu caadi ahaan waa 1366 x 768 pixels, taas oo ku filan in la dhex galo internetka oo la daawado filim waqti ka waqti. Sidoo kale, waxaad had iyo jeer ku xidhi kartaa set of USBs si aad u kordhiso isku xidhka.
Natiijadu waa nidaam ku shaqayn kara qalabka-dhamaadka hoose, samaynta Chromebooks ku habboon miisaaniyad adag ama ardayda. Dabcan, buugaagta Chromebooks waxay si fiican uga shaqeeyaan meelaha ay ka jirto marin-u-helka internet-ka ee bilaa-waayirka ah, laakiin Google ayaa beryahan dambe si wayn u xoojinaysay shaqaynteeda khadka Si aad fikrad uga hesho waxa ay u eg yihiin, waxaad eegi kartaa Dell Chromebook 11 ama Toshiba Chromebook.
Shabakadu waxa ay la mid yihiin Chromebooks in ay aad u yar yihiin, jaban yihiin, oo loo habeeyay daalacashada shabakadda iyo wax kale oo yar. Kumbiyuutarradan buug-yaraha ah ma laha qalab indho-indheyn ah oo ay ku ciyaaraan DVD-yada iyo CD-yada. Si kastaba ha ahaatee, Si ka duwan buugaagta Chromebooks, netbook-yadu waxay inta badan ku shaqeeyaan nidaamka hawlgalka Windows, sidoo kale kii ugu dambeeyay ama ka hor, kuwaas oo inta badan isticmaalayaasha ay yaqaaniin.
Waad riixi kartaa halkan si aad u aragto netbook-yada ugu jaban ee ugu fiican.
Intaa waxaa dheer, shabakado badan, oo wata muraayadaha la taaban karo iyo kiiboodhka, ayaa ku yaal xadka u dhexeeya laptops iyo tablets. netbook-ku waa laptop aad u fiican kuwa jecel inay isticmaalaan codsiyada si ay u ciyaaraan, laakiin waxay doorbidaan inay ku qoraan kiiboodhka jireed.
Ka roon yar ama weyn?
Nooc kasta oo ay yihiin, laptops Waxay caadi ahaan cabbirkooda yihiin 11-17 inches. Go'aankaaga ku saabsan cabbirka laptop-ka aad iibsanayso waa inuu ku salaysan yahay labadan arrimood: miisaanka iyo cabbirka shaashadda.
Ugu horreyntii, cabbirka muraayadda laptop-kaaga ayaa si toos ah u tilmaamaysa qadarka nuxurka uu muujin karo iyo cabbirkiisa, si cad. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad sidoo kale maskaxda ku haysaa in, Marka cabbirka shaashadda uu kordho, xallintu waa inay sidoo kale kordhisaa. Waa inaadan aqbalin wax ka yar xallinta 1366 x 768 ee 10 ilaa 13-inch laptops, ama 1920 x 1080 ee 17 ilaa 18-inch laptops.
Marka labaad, waa inaad maskaxda ku haysaa taas Inj kasta oo shaashad ah oo aad kordhiso, miisaanka laptop-ka ayaa ku kordhin doona ilaa 0.45 kiilo. Dabcan, waxaa jira waxyaabo ka reeban, waxaa jira moodooyin khafiif ah oo khafiif ah oo jebiya isbeddelkan. Waxaa laga yaabaa inaad rabto shaashadda ugu fiiqan uguna weyn suuqa, laakiin ma waxaad diyaar u tahay inaad ku qaadato boorsadaada dhabarka?
Maxay yihiin sifooyinka ay tahay inaad raadiso?
Sida aaladaha teknoolojiyadda intooda badan, laptop-yadu waxay inta badan la yimaadaan astaamo dhowr ah oo laga yaabo inaad u baahan tahay ama aadan u baahnayn si caadi ah. Astaamaha hoos ku taxan ayaa ah kuwa ay tahay in la iska dhigo, kuwa ay tahay inaad raadiso markaad iibsanayso laptop-kaaga.
3.0 USB- Kani waa halbeegii ugu dambeeyay ee farsamada wareejinta xogta USB. Hubi in laptop-kaagu leeyahay ugu yaraan mid ka mid ah dekedahan si wareejinta faylka u dhexeeya laptop-kaaga iyo, tusaale ahaan, USB 3.0 flash drive ay u dhaqso badan yihiin.
802.11ac Wi-FiIlaa hadda 802.11n ayaa ahaa xidhiidhka ugu dhaqsiyaha badan ee internet wireless, laakiin sanadkii la soo dhaafay 802.11ac router ayaa soo muuqday. Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho laptop-kaaga si aad u daawato fiidiyowyada qulqulka ah ama aad u soo dejiso tiro badan oo faylal iyo macluumaad ah, waa inaad si dhab ah uga fikirtaa inaad doorato moodelaha nooca Wi-Fi-ga ah.
Akhriska kaarka SD- Iyadoo ay caan ku tahay kamaradda Smartphone-ka ee qaadashada sawirada sawirada, qaar badan oo ka mid ah soosaarayaasha laptop-yada ayaa bilaabay inay ka takhalusaan qaabkan noocyadooda, si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay qof xiiseeya sawir qaadista, waxaa laga yaabaa inaad weydo akhristaha kaarka SD.
Shaashadda taabashadaIn kasta oo mudnaanta muraayadda taabashada ee laptop-ka ay su'aal ka taagan tahay hadda, weligeen ma garanayno waxa mustaqbalka keeni doono. Si kastaba ha noqotee, waa muuqaal ka dhigi kara jaangooyooyinka qaaliga ah, markaa si fiican u qiimee haddii ay faa'iido u yeelan doonto ka hor intaadan go'aansan.
Su'aalo aad is waydiiso ka hor intaadan iibsan
Kahor intaadan u degdegin inaad iibsato laptop-ka ugu muuqaal wanaagsan, waa inaad naftaada waydiisaa su'aalahan soo socda. Waxay kaa caawin doonaan inaad go'aansato nooca laptop-ka adiga kugu habboon.
Maxaad u isticmaali doontaa inta badan laptop-ka?
Haddii aad u isticmaali doonto wax kasta si ka sarreeya si aad u dhex gasho internetka, u daawato fiidiyowyada qulqulka ah oo aad la sameyso wicitaanno muuqaal ah qoyska waqti ka waqti, hubaal waxaad heli doontaa ku filan kombuyuutar si guud ama dhaqaale ahaan loo isticmaalo. Ma jeceshahay inaad ciyaarto? Halkaas ayaad jawaabta ku haysaa. Wax badan ayaad dhaqaaqdaa oo waxaad u baahan tahay laptop dhuuban oo fudud, isku day Ultrabook. Ka jawaabista su'aashan waxay mar walba ku tilmaami doontaa jihada saxda ah.
Intee in le'eg ayaad ka qabtaa naqshadeynta?
Waxaa jira laptops nooc walba leh, noocyada, moodooyinka iyo cabbirrada - ma aha in la sheego lakabyada rinjiga ama alaabta. Haddii aad u janjeerto inaad ku majaajilooto naqshadda foosha xun ee laptop-yada aad ku aragto agagaarkaaga, waxay u badan tahay inaad rabto kombuyuutar leh kiis aluminium ah, ama ugu yaraan caag jilicsan. Laakiin iska ilaali, naqshadeynta badanaa waa qaali.
Intee in le'eg ayaad kartaa ama aad diyaar u tahay inaad kharash gareyso?
Dhamaadka, kani waa inuu noqdaa barometerkaaga ugu muhiimsan markaad go'aaminayso laptop-ka aad iibsanayso, waa inaadan waligaa kharash gareyn wax ka badan intaad awoodid. Miisaaniyadaadu waxay qeexaysaa qaybta laptop-ka aad iibsanayso.
Ma waxaad raadinaysaa laptop jaban? Noo sheeg inta aad rabto inaad kharash garayso
Maxaan ku qiimaynay?
Waxaa laga yaabaa inaadan garwaaqsaneyn, laakiin Laptop-ku wuxuu nala joogay muddo 30 sano ah, in kasta oo waagiisii ​​hore ay ka yara badnaan jirtay nooca wax qorida ee iska yeelyeelka ah. Muddo tobanaan sano ah, kombuyuutarrada desktop-ka caadiga ah waxay bixiyeen awood xisaabeed badan, awood kaydin oo weyn, iyo kormeerayaal ka wanaagsan qiimo jaban. Bartamihii XNUMX-meeyadii, waxa ay ahayd wax caadi ah in la haysto kombayutarka desktop-ka, laakiin qoysaska qaar ayaa bilaabay in ay arkaan faa'iidooyinka ay leeyihiin laptop-ka.
Muddo ka dib, intarneetku waxa uu ka soo baxay modem-ka-dial-up-ka una gudbay router-ka bilaa-waayirka ah ee aan hadda haysanno, isla markaana barbar socda, Laptop-yada waa ay soo fiicnaanayeen si ay u daboolaan baahiyaha isticmaalayaasha u baahan in ay la socdaan kombuyuutarkooda. Marka qalab loo isticmaalo ganacsatada, bangiyada iyo ciidamada, maanta waxay noqotay qalab lagama maarmaan u ah qof kasta.
Maaddaama la qaadi karo ay tahay qiimaha ugu weyn ee laptop-ka, marka aad qiimeyneyso kumbuyuutarka aad iibsaneyso, waa in aad fiiro gaar ah u yeelataa cabbirkiisa iyo culeyskiisa., iyada oo aan la iloobin processor-kiisa iyo awooddiisa xusuusta. In kasta oo laptop-yada casriga ahi aanay miisaankoodu ka badnaan 9 kiilo sidii kuwii hore, haddana waxaad ogaan kartaa farqiga u dhexeeya nooca 2.72kg iyo ka 1.84. Haddi aad arday tahay oo aad qorshaynayso in aad laptop kaaga geyso fasalka, waa in aad ku qaadaa shandad dhabarka ama shandad waxaana hubaal ah in aad qadarin doonto in uu yahay nooc yar oo fudud. Laakin, dhanka kale, haddii aad tahay injineer codka ah oo aad duubayso riwaayad toos ah oo koox muusig ah, waxa aad waydiin doonto kombayutarkaagu waa in uu noqdo mid awood badan intii suurtogal ah.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo laptops ah. Waxaad ku qarashgareyn kartaa dhowr boqol oo yuuro laptop laptop ah ama dhowr kun oo ku saabsan laptop-ka ciyaaraha heersare ah. Qaar ka mid ah waxaad ku dhex wareegi kartaa internetka oo aad qori kartaa emails, halka qaar kalena ay awoodaan inay socodsiiyaan barnaamijyada tafatirka muuqaalka iyo sawirada dhib la'aan. Nooca laptop-ka aad dooratay waa inuu la socdaa hawlaha aad qorsheynayso inaad ku qabato. Ma u baahan tahay si aad u shaqeyso? Ma rabtaa inaad daawato filimada ama bandhigyada TV-ga aad jeceshahay? Ma tahay qof hal-abuur leh mise waxaad jeceshahay ciyaaraha fiidiyowga? Isbarbardhigga laptop-kan waxaan ku qiimeynay moodooyinka ugu fiican suuqa. Haddii aad rabto inaad sii qoto dheeraato, waxaad akhrin kartaa maqaalladayada laptop-yada.
Waa maxay laptop-ka ugu fiican marka la barbardhigo?
Jawaabta su'aashani maaha mid sahlan oo wax shaqo ah kuma laha laptops-yada aan dhignay miiskayaga. Laptop-ka ugu fiican waa ka daboolaya baahiyaha aad raadinayso oo aan ku habboonayn midka qof kale.
Iyadoo laga yaabo inaad raadinayso laptop-ka ugu fudud ee suuqa si aad ugu safarto meel kasta, isticmaale kale ayaa laga yaabaa inuu raadiyo mid ka soo horjeeda.
Sababtan awgeed, marka la barbardhigo kumbuyuutarkayaga laptop-ka waxaan isku daynay inaan daboolno baahiyaha dhammaan daawadayaasha, annaga oo ku sharxeyna qaabka ugu fiican qayb kasta marka loo eego qiimaha tayada.
Hadii aanad garanayn kombayutarka aad iibsanayso, faallo noogu dhaaf waxaanu kaa caawin doonaa inaad doorato midka ku habboon baahiyahaaga.
Laptop-ka kugu habboon wuxuu gebi ahaanba ku xirnaan doonaa waxa baahidaadu tahay, oo ah waxa aad u isticmaali doonto. Sababtaas awgeed liiska waxaa lagu dalbadaa qiimo ee maaha "tayo".
Haddii aad raadinayso laptop si aad u isticmaasho si goos-goos ah (sida inaad hubiso iimaylkaaga, dhex gal shabakada, cusbooneysiiso shabakadahaaga bulshada, wax ka beddel sawirada, daawato Netflix ama aad qaar ka mid ah shaqadaada Microsoft Office ama Google Docs ka qabato, ha ku adkayn Chromebooks ), Waxaan aad ugu talinayaa inaad tixgeliso buugga Chromebook. Eeg kuwa sare ee hagahan. Haddii xitaa taas, aad ku adkaysato iibsashada laptop-ka Windows, ama aad u baahan tahay wax ka xoog badan, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kombiyuutarada aan ku talinay bilowgii.
Isla maqaalkan waxaad ka heli doontaa kuwa ugu qiimaha wanaagsan ee lacagta. Sidoo kale haddii aad u yara eegto shabkada adigoo isticmaalaya menu-ka navigation-ka iyo kuwa kale waxaad arki doontaa in aanu sidoo kale leenahay isbarbardhig iyo maqaallo gaar ah oo ku xiran nooca laptop-ka aad rabto inaad iibsato. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto laptopsyada ciyaaraha ugu fiican (ciyaaraha), ama laptop-ka ugu fiican shaqada, iwm.
Sida aad ka arki karto liiska, gebi ahaanba waan kula caddaan doonaa. Dhammaan laptop-yada aad hoos ka heli doonto waa kombiyuutarada Windows. Iyo, si ay cadaalad u noqoto, waxaan ku daray moodooyinka Windows-ka ee aan ugu necbahay. Ma aha in laptop-yada Windows ay xun yihiin, laakiin inta badan waxaan isticmaalaa Chromebook-ka loo isticmaali karo hawlo isku mid ah iyo, guud ahaan, way ka jaban yihiin (sida aad arki karto). Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in Apple Macbooks aysan meelna ku lahayn hagahan 🙂
1 Laptobyada ugu jaban ee ugu fiican
1.1 Heshiisyada Maanta ee Laabtoobyada jaban
1.2.1 Laabtoobyada marka loo eego qiimaha
1.2.3 Laabtoobyada nooc ahaan
1.2.4 Laabtoobyada astaanta
1.2.5 Laptops sida ku cad shaashadda
1.2.6 Laptops sida waafaqsan isticmaalka aad rabto in aad siiso
1.3 Laptops-yada ugu jaban ee ugu fiican 2021
1.3.3 ASUS VivoBook 15,6-inji HD ah
1.4 Laptops-yada ugu jaban ee ugu fiican sida ay u isticmaalaan
1.5 Talooyin ka hor iibsashada
1.6 Isbarbardhigga Laptops: Natiijada kama dambaysta ah
1.7 Noocyada Laabtoobyada
1.7.2 Laabtoobyada ciyaaraha
1.7.3 Laabtoobyada Ardayda iyo Shaqada
1.7.4 Goobaha shaqada
1.7.5 Laptops-laba-hal ah (isku-dhafan)
1.7.6 Laptops-ka ciyaaraha
1.7.7 Laabtoobyada Ujeedada Guud
1.8 Ka roon yar ama weyn?
1.9 Maxay yihiin sifooyinka ay tahay inaad raadiso?
1.10 Su'aalo aad is waydiiso ka hor intaadan iibsan
1.10.1 Maxaad u isticmaali doontaa inta badan laptop-ka?
1.10.2 Intee in le'eg ayaad ka qabtaa naqshadeynta?
1.10.3 Intee in le'eg ayaad kartaa ama aad diyaar u tahay inaad kharash gareyso?
1.11 Maxaan ku qiimaynay?
1.12 Waa maxay laptop-ka ugu fiican marka la barbardhigo?
Laptopsyada Jimcaha Black
Laptobyada Cyber ​​​​Isniinta
Laptop-yo jaban 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Macluumaadka ku saabsan buskudka - Contacto